शाखा विस्तारमा आक्रामक बन्दै एनआइसी एशिया, पोखराको पर्स्याङमा सेवा विस्तार – Arthik Awaj
शाखा विस्तारमा आक्रामक बन्दै एनआइसी एशिया, पोखराको पर्स्याङमा सेवा विस्तार
By आर्थिक आवाज २०७५ फाल्गुन १३ गते सोमबार ०८:०७ मा प्रकाशित
पोखरा, १३ फागुन । एनआइसी एशिया बैंक लि.ले शाखा विस्तारलाई आक्रामक बनाएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो एनआइसी एसिया बैंकले देशभर हालसम्म २ सय ७७ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसैक्रममा बैंकले सोमबार पोखराको पस्र्याङमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । शाखाको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले उद्घाटन गरे ।
उक्त अवसरमा बोल्दै मेयर जिसीले बैंकहरु नाफा भन्दा सेवामुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । बैंकका क्षेत्रीय प्रवन्धक दीपेन्द्र शर्माको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपाली, समाजसेवी शिवप्रसाद पराजुली, शाखा प्रवन्धक, श्वेता शेरचन, सुवास सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।
बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर २ सय ७७ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको क्षेत्रीय प्रवन्धक शर्माले बताए । २८९ एटिएम, ३९ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं २३ वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाई मार्फत बैंकले बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दैै आइरहेको छ ।
बैंकको वासलातको आकार रू. २१५ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुलनिक्षेप करिब रू. १७१ अर्ब तथा कर्जा रू. १४९ अर्ब पुगि निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकहरु मध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंकको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइसकेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सूचना अधिकारी सुधिर नाथ पाण्डेले जानकारी दिए । बैंकमा ग्राहकको संख्या करिब १४ लाख ५० हजार छ । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको उनले बताए । हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा कार्यालय संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको बैंकले जनाएको छ ।